Caffeen Oromiyaa yaa’ii idilee 10ffaa isaa Adoolessa 7,2011 ifatti bana – Fana Broadcasting Corporate
Caffeen Oromiyaa yaa’ii idilee 10ffaa isaa Adoolessa 7,2011 ifatti bana
Finfinnee, Adoolessa 5, 2011 (FBC) – Caffeen Oromiyaa yaa’ii idilee 10ffaa waggaa 4ffaa bara hojii 5ffaa isaa Adoolessa 7,2011 ifatti bana.
Af yaa’iin Caffee Oromiyaa aadde Loomii Badhoon ibsa har’a laataniin akka beeksisanitti walga’iin kookoosii Adoolessa 4 ega gaggeeffameen booda, Adoolessa 5,2011 eegalee ammoo ajandaalee yaa’ii idileerratti dhiyaatan irratti miseensonni Caffee gareedhan mari’achaa jiru.
Adoolessa 6,2011 waaree booda biqiltuun ni dhaabama.
Yaa’iin idilee 10ffaa Adoolessa 7,2011 irraa eegalee ifaan banamu raawwii hojii bara 2011 fi kallattii karoora bara 2012 qaamolee mootummaa sadanii fi kan Odiitara Muummichaa Oromiyaa irratti mari’achuun ni raggaasisa jedhameet eegama.
Raawwii hojii bara 2011n hojiin nageenyaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuurratti hojjetame xiyyeeffannaan ni gamaaggamama.
Kana malees wixinee labsii baajata dabalataa bara 2011 fi baajata bara 2012 mootummaa naannoo Oromiyaa Birrii biiliyoona 70 ol ta’u irratti mari’atee ni raggaasisa jedhaniiru aadde Loomii Badhoon.
Wixinee labsii kenna tajaajila lammummaa, dambii tokkoo fi qajeelfama tokko, akkasumas, muudamoota garaa garaa dhiyaatan irratti mari’achuun ni raggaasisa jedhameet eegama.
Koreen giddu galeessaa ODP murteewwan dabarsuun walga’iisaa xumure
Preezdaant Saahilawarq, Peetrii Taalaas mariisisan
Ityoophiyaan biyyoota baha Afrikaa misooman walitti hidhuuf hojjechaa jirti -obbo…
Miseensonni komishinii Araaraa fi Nageenyaa naannoo Gambeellaattii kutaalee hawaasaa…
Eerdoohaan gaaffii Ameerikaan dhukaasa dhaabi jedhu…
Miseensonni koree giddu galeessaa ODP Dr Abiyyiif kennaa…
Namoonni meeshaa waraanaa otuu daddabarsanii to’atamaan…